Ny endri-tsoratra minimalista tsara indrindra | Famoronana an-tserasera
Ny fampiasana typography dia tsy noheverina ho toy ny zavatra tafahoatra, mifanohitra amin'izany. Ny safidy ny typography, ny endriny, ny composition, manana a fiantraikany lehibe hita maso rehefa mandefa hafatra ho an'ny besinimaro. Izany no mahatonga ny famolavolana typography ankehitriny ho zavakanto tena sarobidy izay misy tantara lava.
Androany isika dia hanomboka amin'ny fijerena ny tantara ao ambadik'izany, fohifohy, ary hanome anao safidy endri-tsoratra minimalista izay tsy mety ho very ao amin'ny katalaogin'ny fanondroana typografika.
Mba hahatakarana ny manodidina ny tantaran'ny typography dia tsy maintsy miverina any amin'ny niandohan'ny fanoratana mankany amin'ny vanim-potoana nomerika misy antsika ankehitriny isika.
1 Fiantombohan'ny dia: tantaran'ny typography
2 Fanasokajiana mahazatra
2.1 serif typography
2.2 Sans serif na sans serif typeface
2.3 Script na manual fonts
2.4 karazana endri-tsoratra
3 Ny endri-tsoratra minimalista tsara indrindra
Fiantombohan'ny dia: tantaran'ny typography
Tsy maintsy miverina any Mezopotamia isika tamin’ny taonjato faharoa tal Nampiasa totohondry sy maty ny mpanao sokitra mba handrafetana ny endriky ny litera sy glyphs. Ireo litera romanina tranainy ampiasaina amin'ny tranobe dia nahatonga ny aingam-panahy ho an'ny ankamaroan'ny fianakaviana karazana serif izay fantatsika ankehitriny, toy ny Times New Roman malaza.
Mandroso ara-potoana isika, ary ao amin'ny taonjato faha-XNUMX any Eoropa, izay ahitantsika ny taratasy voalohany nosoratan-tanana nataon'ny moanina ho an'ny sora-tanana mazava izay nahitana litera voaravaka. Ity teknika ity dia fantatra amin'izao fotoana izao amin'ny anarana hoe calligraphy gothic, ary teknika fanoratana tanana mazoto miasa.
Ny tantaran'ny typography araka ny fantatsika ankehitriny dia niandoha tamin'ny ny fanontam-pirinty noforonin’i Johannes Gutenberg tamin’ny taona 1440, noforonina tany Alemaina. Nisy milina iray afaka nanao lasitra ho an'ny fanontana taratasy manaraka. Io zava-baovao io no nahafahana nanao pirinty ny Baiboly misy andalana 42.
Noho ny fahombiazan'ny fanontam-pirinty dia nahatratra an'i Eoropa manontolo ny fanontam-pirinty azo mihetsika ary miaraka amin'izany dia tonga lafatra ny famolavolana azy ary namela azy io. misokatra ny fivarotana pirinty manerana ny kaontinanta.
Ny asa lehibe indrindra dia nomena tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo, izay Ny typography dia manomboka mivoatra miaraka amin'ny fanatsarana ny karazana cast, ny velaran-tany niasany sy ny kalitao avo kokoa amin'ny ranomainty, izany rehetra izany dia nidika fiovana teo amin'ny tontolon'ny zavakanto an-tsary.
Nandritra ny taonjato faha-XNUMX dia nisy fiantraikany mivantana tamin'ny typografia ny fandrosoan'ny teknolojia, ary ny fisehoan'ny ordinatera no zava-niseho nisy fiantraikany indrindra. Manomboka izao, Ny rafitra fampahalalam-baovao dia nanampy ny mpamorona hahatakatra sy hamorona fianakaviana karazana karazana.
Araka ny fantatsika, ny typography dia raisina ho ny fitambarana famantarana natao mitovy endrika sary.
Ny endri-tsoratra dia azo sokajiana amin'ny fomba samihafa, amin'ity tranga ity dia hanao izany isika araka ny anatomie, ka blocs efatra no samy hafa.
Ny fahasamihafana miavaka indrindra amin'ity vondrona ity dia ny ny fampiasana ny serif amin'ny toetrany, na eo amin’ny fotony na eo an-tampony. Ny fiaviany dia avy amin'ny dingan'ny sokitra vato voalohany.
Sans serif na sans serif typeface
Ny endri-tsoratra amin'ity vondrona ity dia tsy manana serif, ny azy mitovy ny kapoka ary mahitsy ny toetrany. Ny fotoana voalohany nahitana an'ity karazana typography ity dia tamin'ny fotoana nisian'ny revolisiona indostrialy amin'ny afisy.
Script na manual fonts
Fantatra amin'ny anarana hoe litera manual, hatramin'ny miezaha maka tahaka ny sora-tanana. Matetika no voaravaka ny taratasin'izy ireo.
Ao amin'ity vondrona ity dia hahita ireo endri-tsoratra izay efa natao haingo.
Rehefa fantatsika ny tantaran'ny typography sy ny fanasokajiana azy, dia hamela anao ny lisitry ny ny endri-tsoratra minimalista tsara indrindra ho an'ny endrikao.
Ny typography izay nofidiana dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny marika iasanay sy ny filozofiany, amin'izany fomba izany dia hampita ny hafatra araka ny tokony ho izy sy hahatratra mpihaino betsaka kokoa.
Typography minimalista, tena tsotra nefa miaraka amin'ny fomba tena kanto. Gaoel dia endri-tsoratra sans serif izay ahitanao ankoatry ny isa sy ny mari-piatoana, ny lantom-peo ho an'ny fiteny samihafa. Ny hany tsy fahampian'ity endri-tsoratra ity dia ny litera lehibe ihany no misy.
Endrika minimalista sy tsotra ho an'ny tetikasanao. dia a typografia maoderina izay ahitanao sahy sy tsy tapaka, isa, mari-piatoana, litera hafa ary koa, litera lehibe amin'ny fiteny maro.
Ny endritsoratra minimalista dia tsy voatery ho sans-serif ihany, amin'ity tranga ity dia manolotra ny endri-tsoratra Agatha, izay karazana fomba fanoratana tanana, izany hoe maka tahaka ny sora-tanana. Izy io dia manolotra antsika tarehintsoratra lehibe sy kely, fanisana ary mari-piatoana.
Namboarina tamin'ny endrika geometrika, lasa i Beckman typography maoderina sy mahery. Ny teboka tsara amin'ity endri-tsoratra ity dia ny manolotra antsika lanja enina samy hafa, amin'ny lafiny iray, ny ratsy dia ny hoe misy litera lehibe sy marika kely isan-karazany.
hafa indray no atolotray anao endri-tsoratra minimalista italic izay hanome endrika kanto sy vehivavy ny endrikao.
Typography an'ny vondrona sans serif. dia a endri-tsoratra mivohitra nefa misy sakan'ny tsipika manampy azy ho mora vakina.
Raha endrika geometrika no tadiavinao, ity ny endritsoratra Prime. Karazana karazana endrika geometrika manana sanda azo vakiana avo lenta amin'ny peso roa; maivana sy tsy tapaka.
Sans serif font izay afangaro ny kanto sy ny tsotra. Izy io dia endri-tsoratra mety amin'ny lohateny, lohapejy, fanamarihana ambany pejy, sns. Izy io dia manolotra antsika amin'ny lanjan'ny endritsoratra telo: maivana, mahazatra ary sahy. Ho fanampin'izany, tarehin-tsoratra roa, litera ambony sy ambany, mari-piatoana, isa ary accent.
Karazana karazana semi-serif kanto. Manome tarehin-tsoratra lehibe ihany. Amin'ny maha teboka ratsy dia holazainay fa tsy misy litera kely izy io.
Una endritsoratra tena feno, satria manome antsika piso efatra; maivana, alokaloka, avo roa heny ary sahy.
Condensed Sans Serif Typeface. Kelson dia manana lanja enina ary tarehintsoratra ambony ihany, tsy misy singa mari-piatoana.
Ny matihanina eo amin'ny tontolon'ny kanto grafika dia miova hatrany, noho izany mila fomba vaovao hifandraisana amin'ny famoronana izy ireo, mba hanatratrarana ny mpihaino anao, ary miaraka amin'ny fanampian'ny typography no fomba manaitra indrindra hahatratrarana azy.
Tsy ny mpamorona ihany no ao anatin'ity fiovaovana ity, fa ny typography ary tsy hijanona amin'ny vanim-potoana nomerika, satria, amin'izao vanim-potoanan'ny tantara izao, dia maro kokoa ny fahafaha-mandroso noho ny fandrosoana ara-teknolojia ananantsika ankehitriny. amin'ny andro.
Raha nanaitra ny sainao ho amin'ny tetikasanao ho avy ity lahatsoratra ity, fa koa ny fanirianao hampahery ny tenanao sy hikaroka ny famolavolana ny anao manokana, avy amin'ny famoronana an-tserasera dia mamporisika anao izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ny endri-tsoratra minimalista tsara indrindra